सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणः मोदीको ४ स्पष्ट सन्देश यस्तो छ ? « Today Khabar
सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणः मोदीको ४ स्पष्ट सन्देश यस्तो छ ?
प्रकाशित १९ माघ २०७४, शुक्रबार ०२:४७
काठमाडौं, १९ माघ । भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौं आइपुगेकी छिन् । उनी बिहिबार अपरान्ह भारतीय वायु सेवाको विशेष विमानमार्फत काठमाडौं आएकी हुन् ।त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै स्वराजले आफू कुनै एजेन्डा ल्याएर नेपाल नआएको बताएकी थिइन्।
अपराह्न साढे ४ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी स्वराजलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थराज्यमन्त्री राणाले स्वागत गरेका हुन्। राणाका साथमा पत्रकार ऋषि धमला,भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, भारतीय दूतावासका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। कुटनीतिक प्रचलनअनुसार विदेशमन्त्रीलाई राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्ने चलन छ। तर, भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यमन्त्रीबाट स्वागत गरेको इतिहास छ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार दिउँसो ४ बजे विशेष विमानबाट काठमाडौं ओर्लिएकी स्वराजले पहिलो राजनीति भेट ओलीबाट सुरु गरेकी हुन्। ओली र स्वराजबीच के कुराकानी भयो भन्ने खुलाइको छैन। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजबीच ‘वान टु वान’ भेटवार्ता भएको छ। राजधानीको सोल्टी होटलमा ओली र स्वराजबीच साँझ पौने सात बजेदेखि भेटवार्ता सुरु भएको हो।
एमालेले स्वराजको सम्मानमा सोल्टी होटलमा रात्रीभोजको आयोजना गरेको छ। भोजमा ओलीसँग सुवास नेम्वाङ, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदिप ज्ञवाली, राजन भट्टराई, विष्णु रिमालका साथै युवराज खतिवडा लगायत सहभागि छन्।
एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भने ‘स्वराज एमालेकै पाहुना हुन् । किनभने एमालेका एक नेताका अनुसार भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेरै स्वराज आएकी हुन् ।
चुनावपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँग दुई पटक फोन सम्वाद गरेका थिए । विहीबार बालकोट बैठकमा ओलीले गरेको रिपोटिङ अनुसार ओलीले मोदीसँगको फोनमा भनेका रहेछन्- धेरै कुरा के गर्नु, तपाईको प्रतिनिधि पठाउनुस् । भारतले कर्मचारी पठाए स्वीकार्य नहुने ओलीले मोदीलाई प्रष्ट संकेत गरेका कारण मोदीले विशेष दूतका रुपमा विदेशमन्त्रीलाई पठाएको एक नेताले बताए ।
जानकार भन्छन्, स्वराजले आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका स्पस्ट ४ सन्देश बोकेर आएकी छन् । विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, (जो प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ) र अन्य शीर्ष नेतालाई त्यो सन्देश सुनाउनु चाहन्छिन् । मोदीको सन्देशमा नेपाली नेताले जनाएको प्रतिक्रिया वा प्रतिवद्धता बोकेर उनि आफ्नो २५ घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर भोली (शुक्रबार) भारत फर्कने छिन् ।
यी हुन् मोदीका ४ सन्देश :
१.प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट बन्ने कुनैपनि सरकारसँग मिलेर काम गर्न भारत तयारः
मोदीको पहिलो सन्देश छिमेकी नेपालले अपनाउने प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट बनेको जुनसुकै पार्टीको सरकार भएपनि त्योसँग मिलेर काम गर्न भारत तयार छ भन्ने नै हुने छ । पुरै प्रजातान्त्रिक प्रकृया अपनाएर बनाएको नेपालको संविधानमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउदै नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा बिग्रीएको दुई देशबीचको सम्बन्ध र त्यसले भारतलाई विश्व राजनीतिक मानचित्रमा पारेको प्रभाव मोदीले महशुस गरेका छन् । गोप्य वैठक तथा व्यवहारमा केही तलमाथि गरेपनि सम्बन्ध सुधारका लागि मोदीको यो मूल सन्देश हुनेछ । नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भारतले अब हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने उनको प्रष्ट सन्देश हुनेछ ।
२. प्रजातान्त्रिक प्रकृया सम्पन्न गरेकोमा बधाई
तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकोमा मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसअघि पनि बधाई दिईसकेका छन् । आफ्ना विदेशमन्त्री मार्फत पनि मोदीले त्यो शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । जुन औपचारिक र राजनीतिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने स्वभाविक विषय हो ।
३.ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव
मोदीको तेश्रो तथा पहिलो महत्वको सन्देश भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनमा पाएको जनमतका लागि बधाई दिदै भावी सरकारको नेतृत्वको शुभकामना दिनु हो । जुन कुरा मोदीले छोटो टेलिफोन कुराकानीमा भनिसकेका छन् ।
स्वराज मार्फत त्यसलाई दोहो¥याउँदै मोदीले भोलीको सहकार्य के आधारमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराका प्रष्ट संकेत दिनेछन् ।
नाकाबन्दी ताका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेको सहकार्यबाट भारतमा निक्कै आलोचना खेप्नुपरेका मोदीलाई नयाँ सरकार फेरी उत्तरतर्फ नफर्कियोस भन्ने त्राश छ । त्यसैले पनि उनले यस पटक ओलीलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेर स्वराजको भ्रमण गराएका छन् । मोदीको रुची बुझेका र नेपालको भूराजनीति बुझेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई केही गरेर देखाउने हो भने भारतसँग सिंगौरी खेलेर मात्र हुँदैन भन्ने महशुस गरेका छन् ।
ओलीले मोदीलाई गणतन्त्र दिवसमा लेखेको पत्र र सहकार्यका लागि देखाएको आतुरताले पनि त्यसलाई पुष्टी गर्दछ । जवाफमा ओलेले विगतका तितामिठा छोडेर आगामी दिनमा भारतसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिनेछन् । स्वराजले पनि आगामी दिनमा बन्ने सरकारलाई भारतको पूर्ण समर्थन रहेको आश्वासन दिनेछिन् ।
४. नयाँ सरकार निमार्णमा चासो
मोदीले स्वराज मार्फत पठाएको तर अघोषित महत्वपूर्ण सन्देश भनेको ओली नेतृत्वको सरकार कस्तो बन्छ भन्ने हो । भारतले यसअघि नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलको भरथेगमा ५ वर्ष सरकार चलाउन गरेको प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरे । त्यसपछि उसले दोश्रो प्रयास थाल्यो । एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तर, माओवादीलाई कमजोर हिस्सा सहित सहभागि गराउने । सो सरकारमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि लैजाने ।
भारतको दोश्रो प्रस्ताव अहिले कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि मोदीको प्रष्ट सन्देश विशेषगरी एमाले र मधेशी नेताले पाउने छन् । चौथो प्रस्तावले भने सहकार्यमा रहेको वाम गठवन्धन र पार्टी एकता प्रकृयामा असर पार्न सक्ने माओवादी नेताको आशंका छ । वाम एकताले नेपालमा स्थिर राजनीतिक शक्ति र सरकारको परिकल्पना गरेको छ । दिर्घकालिन रुपमा नेपाली राजनीति त्यो बाटोमा जानु भनेको विकासको आधार तयार हुनुपनि हो । नेपाल आत्मनिर्भर शक्तिशाली हुनु दक्षिणी छिमेकीले सहज रुपमा पचाउने कुरा होईन ।
त्यसैले पनि अहिले उसले सत्ता समिकरणको असमझदारीको छिद्रबाट छिरेर वाम गठवन्धन भत्काउन प्रयास गर्ने संभावना देखिन्छ । जुन प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ५ वर्षे प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर प्राप्त भएन फरक रुपमा तर त्यही रणनिति भारतले एमाले अध्यक्ष ओलीमा अख्तियार गर्ने उसको चालहरुले देखाएको छ । स्वराजका भेटवार्ताको प्राथामिकताले समेत यी कुराको संकेत गरेको छ । साभारः दिल निशानी डट कम